RLM Communication : Nankalaza ny faharoa taona nijoroany -
AccueilRaharaham-pirenenaRLM Communication : Nankalaza ny faharoa taona nijoroany
Nankalaza ny faharoa taona nijoroany ny teo anivon’ny Vondrona RLM Communication ahitana ny gazety Triatra, La Ligne de Mire, La Depêche de Madagascar, Le Citoyen, Akon’i Madagasikara, ny AZ Radio, ny On Air Radio sy On Air TV, ny RTN, ny La Chasse info, ny 24h Mada, ny zoma 16 marsa teo, tetsy amin’ny Hotel Carlton.
Nambaran’ny Filoha tale jeneralin’ny Vondrona, Mbola Joseph Rajaonah, tamin’ny lahateny fohy nataony nanoloana ireo olo-manan-kaja nasaina tamin’izany, fa noho ny fisian’ny fitsingilahilana, ny fisian’ny zara-vilana teo amin’ny tontolon’ny serasera teto amin’ny firenena no nisian’ny tsirin-kevitra tamin’ny nananganana ny Vondrona RLM Communication. “Diso malalaka loatra angamba ny asa fanaovan-gazety teto amin’ny firenena ka lasa niompana tamin’ny fanenjehana ny mpitondra Fanjakana ny ankamaroan’izy ireo”, hoy ny filoha tale jeneralin’ny Vondrona RLM Communication, Mbola Rajaonah.
Notohizany sy notsindriany tamin’ny kabary nataony ihany fa izany fitongilanana sy fanapariahana vaovao tsy dia marim-pototra loatra ka lasa famahanan-dalitra ny vahoaka, nanapa-kevitra ny amin’ny hampitoviana ny tanjaka amin’ny fanomezam-baovao marina sy mari-pototra ary voalanjalanja ny eo anivon’ny RLM Communication ivondronan’ireo gazety an-tsoratra sy haino aman-jery voatanisa etsy ambony ireo.
Ankoatra izay, nambaran’ity tompon’andraikitra voalohan’ny vondrona RLM Communication ity fa nisy ny finoana sy fahatokisana ny fitondram-panjakana satria raha nisy ny teritery sy ny sakantsakana dia tsy tafajoro ireo gazety sy haino aman-jery tarihiny ireo. “Malalaka tokoa ny asa fanaovan-gazety sy ny tontolon’ny serasera amin’izao fotoana izao. Noho izany, nihazakazaka ny vondrona RLM Communication tao anatin’izay roa taona nijoroany izay amin’ny fametrahana ny demokrasia, satria maro loatra ny vaovao mitongilana sy manenjika ny fitondrana taterin’ireo haino aman-jery sasany. Araka izany, miezaka hatrany ny RLM Communication mitatitra ny vaovao marina sy voalanjalanja ho an’ny vahoaka”, hoy hatrany i Mbola Rajaonah.
Etsy andaniny, tsy nohadinoiny koa ny nanambara fa amin’ny maha olom-pirenena azy sy ireo mpiara-miasa, fa tsy hamboly korontana velively eto amin’ny firenena amin’ny fanomezana vaovao mety hampiteraka savorovoro ny RLM Communication. “Samy mahatsapa ny voka-dratsy hateraky ny korontana ny rehetra, ka noho izany tsy tanjon’ny RLM Communication velively ny hampisy sy hampiteraka korontana eto amin’ny firenena”, hoy izy teny am-pamaranana.
Nambaran’ny filohan’ny Antenimieran-doholona, Rivo Rakotovao, fa ilaina eo amin’ny fampandrosoana ny firenena iray ny tontolon’ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety. Ilaina ihany koa ny fifaninanana eo amin’izany sehatra izany.
Nanambara kosa ny minisitry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrim-panjakana, Harry Laurent Rahajason, fa malalaka ary tsy misy teritery mihitsy ny tontolon’ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety eto amintsika amin’izao fotoana izao. Noho izany, hoy izy, tokony hanaja sy hanaraka izay voalazan’ny lalàna ny rehetra mba tsy hitondra ny Fanjakana any amin’ny fanakatonana ilay orinasa.
Nitso-drano ny Vondrona RLM Communication kosa indray ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara (OJM), Gerard Rakotonirina, hahaleo, hahalasa eo amin’ny tontolon’ny serasera sy ny haino aman-jery sy ny asa fanaovan-gazety.
Araka ny tafatafa niarahan’ny filoham pirenena tamin ireo tompon’ andraikitry ny tanànan’ i Nosy Be izay nitsena azy teo am-pahatongavana sy araka ny vaovao izay nangonin ireo tompon’ andraikitry ny serasera ny fiadidiana ny repoblika ...Tohiny